Uhlu lwefoni lwe-B2c | Database lakamuva Lokuposa
Ikhaya » Uhlu lwefoni le-B2c
Uhla lwabathengi befoni
Zama ukuthola abantu abathengi izinombolo zocingo noma uhlu lwezinombolo zeselula? Database Lokugcina Lokuposa likunikeza uhlu lwefoni yomthengi wakho. Sizokunikeza ngomuntu othengiwe futhi ohlanzekile oxhumana nomthengi nenombolo yocingo. Bheka ngezansi ukuhola kwefoni yethu okuholela.
Thola abathengi abahle ngokuthengisa kwakho inkampani.
Izinombolo zefoni zihanjiswa kuwe nge-imeyili ngokushesha
Ukuhola kungokwakho ukulanda kukhompyutha yakho
Siyaziqhenya ngemininingwane yethu futhi iyihlanganisile evela emithonjeni eminingi
Ifomathi ye-CSV futhi iyahambelana ngokudayisa nezinye isoftware ye-CRM
Phatha ukuthengisa kwakho ngendlela engabizi
I-90% ukuxhumana okuqinisekisiwe okuholela
Khetha ku-lead nemvume yebheyili
I-GDPR Ilungele Ukuholela.